Burcad badeeda oo siidaysay markab xamuul ka dib malaayiin madaxfurasho (Sawiro) – SBC
Burcad badeeda oo siidaysay markab xamuul ka dib malaayiin madaxfurasho (Sawiro)
Kooxaha shufto badeeda Soomaalida ayaa sii daayey markab xamuul oo laga leeyahay wadanka Siiriya oo ay afduub u haysteen ka dib markii la siiyey lacag madaxfurasho ah oo gaaraysa 2.5 milyan oo doolar.
Markabkan oo lagu magacaabo MV Khaled Muhieddine K ayaa ku gooshayey calanka Togo waxaana uu u gacan galay kooxaha Jiriga badda bishii Janaury ee sanadkan iyagoo ka qabsadey waqooyiga Badda Carabta isla markaana 330 mile Koonfur bari kaga beegan magaalada Salalah ee wadanka Cumaan. Markabka ayaa waxaa saaran shaqaale gaaraya 25 kuwaasi oo 22 ka mid ah ay u dhasheen wadanka Siiriya halka sadexna u dhalatey Masar.
Mid ka mid ah kooxda burcad badeeda ee haysatey markabkaasi ayaa u xaqiijiyey wakaalada wararka ee Reuters in shaley (Arbcadii) lacagta madaxfurashada oo dhan 2.5 milyan oo doolar hawada looga soo tuuray isla markaana ay sii daayeen markabkaasi ka dib markii ay heleen lacagtii madaxfurashada.
”Lacagta madaxfurashada shaley arooryadii ayaa hawada nalooga soo tuuray, waxayna dhameyd 2.5 milyan oo doolar, waxaana go’aansanay inaan siideyno markabka, wuxuuna hada bilaabay in uu dhaqaaqo, uuna xeebteena uga baxo si nabad ah” sidaasi waxaa yiri nin ka mid ah kooxaha jiriga badda oo magaciisa ku soo koobay Cumar oo sheegay in uu ku sugan yahay deegaanka Ceel Dhanaane mar uu u waramayey wakaalada wararka ee Reuters. Andrew Mwangura oo ka mid ahaa hay’ad qaabilsan amaanka & ka warqabka badmaaxiinta oo fadhigeedu yahay wadanka Kenya, haatan ah tifaftiraha website ka hadlaya arimaha burcad badeeda ayaa sheegay in uu ka warhayo arinta wadaxaajoodka la xirira siideynta markabkaasi, balse wuxuu sheegay inaanu xaqiijin in si nabad ah lagu siideyn markabkaasi.
Kooxaha shufto badeeda ayaa ka sameynaya lacag malaayiin doolar gaaraysa afduubka maraakiibta ganacsiga ee isagu jira kuwa xamuulka & kuwa shidaalka xambaara ee Tankers loo yaqaan, iyagoo ka afduubanaya Qooriga Cadmeed & Badweynta Hindiya, iyadoo taasina ay hareer socota isku dayga maraakiibta shisheeye isku hawlayaan in ay ka hortagaan weerarada afduub ee kooxahaasi.